Ikusasa Eliqhakazile Lokuthengisa | Martech Zone
Ngenkathi imikhakha eminingi ibone ukwehla okukhulu emathubeni okuqashwa ngentuthuko kwezobuchwepheshe, amathuba emisebenzi okudayisa njengamanje ayakhuphuka futhi abheke ukukhetha okuvikelekile esikhathini esizayo. Umsebenzi owodwa kwemine e-United States usembonini yezokuthengisa, kepha le mboni ihlanganisa okungaphezulu kakhulu kokuthengisa. Eqinisweni, ngaphezu kwe-40% yezikhundla ezidayiswayo yimisebenzi ngaphandle kokuthengisa.
Imisebenzi ephezulu engu-5 ekhuphukayo ekuthengiseni iwukuhlaziywa kokumaketha, ukumaketha nge-imeyili, usesho lwemvelo, usesho olukhokhelwayo, kanye nemithombo yezokuxhumana. Kusobala ukuthi i-e-commerce ibalulekile empumelelweni yezentengiselwano futhi izimali eziphezulu kulo nyaka zizoba kuselula, ukulungiswa kwamasayithi, nokumaketha. Abanye abathengisi sebevele bangaphambi komdlalo ngobuchule obusha bokuphakama ngaphezu kwabo bonke abanye. UKroger unamakhamera we-infrared infrared infrared womzimba ukunquma ukuthi mingaki ehlola imizila ukuvula. Uhlelo lokusebenza lwe-Walmart lushintshela kwimodi esitolo, ukuze ukwazi ukuthola kalula noma yini oyifunayo. Ngezinga lokukhula kwezobuchwepheshe kanye nokwanda kwe-e-commerce, sizobona ushintsho oluningi embonini yezokuthengisa eminyakeni emihlanu ezayo kunalokhu esikwenze kule minyaka eyi-5 edlule. I-Baynot yabelana ngezibalo zabathengisi nabasebenzi bayo, okuyizinkampani eziseqophelweni lomdlalo wabo, kanye nokutshalwa kwezimali okuphezulu kwe-e-commerce kuka-2014 ku-infographic engezansi.
Ikusasa lezentengiso ne-e-commerce liqhakazile emisebenzini, emisha nasekutshalweni kwemali.
Tags: i-aeropostalei-baynotI-carmaxezokuhweba ngekhompyuthakrogermacy'sindawo yokugcina amadodanordstromingxoxookuthengiswa onlineqtreitekutsengisasephoraizinkanyeziisitolo sezitshaama-walgreensi-walmartama-wegmansWhole Foodszappos
Ukumaketha kuzithameli ze-Cross-Platform
Amathrendi wokuqasha Abakhangisi bokuqukethwe